Zuva reMulticulturalism muTransylvania riri kuunza vashanyi nenzvimbo pamwechete
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Zuva reMulticulturalism muTransylvania riri kuunza vashanyi nenzvimbo pamwechete
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • misangano • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Romania Kupwanya Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Chiitiko chemuno chekushanya muTransylvania chinotarisirwa kukwezva vanhu vanobva munyika dzinopfuura makumi maviri asiri eEU, vanogara muBrasov uye vari kushanya mudunhu iri.
Chiitiko chemuno chekushanya muTransylvania chinotarisirwa kukwezva vanhu vanobva munyika dzinopfuura makumi maviri asiri eEU, vanogara muBrasov uye vari kushanya mudunhu iri. Brosov musha wemigwagwa yakatetepa muEurope uye inzvimbo yakanaka yekupemberera.
Vanhu vanobva kwakasiyana siyana vekuEurope vachange vachiratidzira Mugovera, muPiata Sfatului, tsika dzenyika dzadzo, uye tsika mukucherechedza 6th edition yeMulticulturalism Day.
Brașov iguta riri muTransylvania dunhu reRomania, rakakomberedzwa neCarpathian Mountains. Inozivikanwa neyakavakirwa maAlexon masvingo uye masvingo, iyo yakareba yeGothic-dhiraira Nhema Chechi uye inofadza mafi. Piaţa Sfatului (Kanzuru Square) mutaundi rekare rakaunganidzwa rakakomberedzwa nezvivakwa zvebaroque zvine mavara uye inogara kuCasa Sfatului, yaimbova horo yeguta yakachinja mamuseum enhoroondo
Yakapoteredzwa nemakomo eSouthern Carpathian Mountains uye anoyevedza ne gothic, baroque uye rumutsiridzo rwekuvaka, pamwe nehupfumi hwenhoroondo dzinokwezva, Brasov ndiyo imwe yenzvimbo dzinoshanyirwa muRomania.
Yakagadzwa neveTeutonic Knights muna 1211 pane yekare Dacian saiti uye yakagadziriswa nemaSaxon seimwe yemanomwe masvingo macoldels *, Brasov inoburitsa yakasarudzika medieval ambiance uye yakashandiswa senge kumashure mune mazhinji apfuura nguva mafirimu.
Nzvimbo yeguta pamharadzano yenzira dzekutengesa dzinobatanidza Humambo hweOttoman nekumadokero kweEurope, pamwe chete nemimwe mitero, yakabvumira vatengesi veSaxon kuwana hupfumi hwakawanda uye kuita simba rakasimba mune zvematongerwo enyika mudunhu iri. Izvi zvakaratidzirwa muzita reguta reGerman, Kronstadt, uye zvakare muzita rayo rechiLatin, Corona, zvinoreva Crown City (nekudaro, jasi remaoko eguta iri korona ine midzi yemuouki). Masvingo akavakwa akakomberedza guta uye achienderera mberi achiwedzerwa, aine shongwe dzinoverengeka dzakachengetedzwa nemapoka akasiyana emakambani, maererano netsika dzekare.
Kunze kwekuratidzwa kwenyika dzavo uye zvipfeko zvechinyakare, vatori vechikamu vakaratidza mireza, zvinhu zvidiki zvakagadzirwa, pendi yechinyakare, zviwitsi kana nechingwa chechinyakare, sekuburitswa kwakaitwa pamasitendi ePiata Sfatului.
Vagari veBrasov nevashanyi vakagamuchira "pasipoti" yakagadzirwa nevarongi vechiitiko ichi, icho chinosanganisira yekuzvinamatira "maviza," sekukoka kwekufananidzira kuenda kune imwe nyika.
“Chiitiko ichi chakakura zvakanyanya gore negore. Kana iyo yekutanga edition takakwanisa kuve nayo kuVadzidzi 'Imba muBrasov, heino isu tiri yeyiyi 6 edition muPiata Sfatului. Iko kudiwa kwaive kwakanyanya kwazvo kubva kune vatorwa vanogara muBrasov uye vaida kuuya kuchiitiko ichi, izvo zvinoita kuti tifare. Takadhinda mapasipoti mazana mashanu kungoitirwa chiitiko ichi, icho chainge chatopera muawa rimwe chete. Iyo Multiculturalism Mazuva muBrasov chiitiko chakamirirwa nevanhu uye mamiriro ekunze aivewo kudivi redu,
Camilla Salas, 32, anobva kuColumbia, akagara muBrasov kwemakore maviri nehafu apfuura, mushure mekuroora mugari weBrasov. Ari kudzidza mutauro weRomania kuRegional Center yeKubatanidzwa kweVatorwa.
“Ndiri kufara zvikuru kugara muBrasov. Mumakore maviri nehafu, ndakaita shamwari dzakawanda pano. Ndakasangana nemurume wangu kudzokera kuColumbia, kwaakamboshanda kwechinguva. Ndakabvuma kuuya kuRomania uye kugara muBrasov uye ndakazvijaira chaizvo. Mamiriro ekunze akange asiri dambudziko. Kana kuchitonhora ndinopfeka dzimwe hembe. Ndiri kufara kuva pano. PaKisimusi neEvha yeGore Idzva tichaenda kuColumbia uye hunyanzvi hwatinahwo nhasi hunonditendera kuti nditaure naamai vangu nemhuri yangu mazuva ese. Guta rangu rakasiyana neBrasov, tine miti yemichindwe ipapo, asi tichavawo nemuti weKisimusi wekugadzira, ”Camilla Salas akaudza AGERPRES.
Akataura zvakare kuti akabudirira mumakore maviri kudzidza mutauro wenyika yake yekurera zvakanyanya, kunyanya nekuda kwatezvara vake, kubva kuna Brasov, uyo asingamutenderi kuti ataure mimwe mitauro kunze kweRomania, izvo zvinomubatsira zvakanyanya , nekuti iye achazoda kutora bvunzurudzo yekuwana chizvarwa cheRomania pane imwe nguva.
Vashanyi muPiata Sfatului vakapiwawo ratidziro yemitambo yechinyakare kubva kuCuba, Mexico, Philippine, China, Japan, Republica yeMoldova, Peru, Dominican Republic uye kuratidzwa kwezvipfeko padariro munzvimbo iyi.
Nyika dzakaita seDominican Republic, Columbia, Syria, South Korea, Japan, Philippine, Peru, Mexico, Republic of Moldova, India, Turkey, China, Ukraine, Jordan, Nigeria, Israel, Egypt, Ecuador, Iran yakaunzawo mashoo ku Piata Sfatului.
Iyo Multiculturalism Mazuva muBrasov Festival yakatungamirwa nekuvhenekesa kwechiratidziro "Mifananidzo Yekutama," chakaitika neChishanu manheru kuPatria Hall uye chichagumiswa nemusi weSvondo manheru, paMulticultural Center yeTransilvania University, uko ichaitika kuratidzwa kweiyo firimu "Stranger muParadhiso," ichiteverwa negakava pamusoro penyaya yevapoteri muEurope.